Munaasabad Cawbaar lagu xusay!! | HimiloNetwork
Munaasabad Cawbaar lagu xusay!!
Posted by: Zakariya in Wararka July 6, 2015	0 362 Views
Muqdisho (Himilonew) – Cawbaar dhimashada ayuu qaabilay. Wax walba oo dhimashada doorta suu u noqdo wax qiima leh, qiimahaas ayuu la harayaa. Cidna kama qaadan karto qiimahaas. Cawbaar wuu ogaa inuu mar un iilanayo.
Tani waa hoga-tusaale dhiiri-galineed oo inooga imaanaysa aqoon-yahannada ku nool xaafadda magaca Cawbaar ku caan-baxday ee agagaaraha Maxamuud Xarbi, kadib kulan dib-isu-xusuusineed ay ku qaateen isla xaafaddan ayay ku muujiyeen wixii uu waayo badan usoo ahaa Cawbaar iyo waxa xiga kadib iilashadiisa.
“Kuwa geeridiisa ka danbeeyey waxay moog yihiin inaysan qiimihiisa kaga qaadan Karin kaliya inay raadkiisa cirib-tiraan,” ayuu u sheegay mareegta Himilonews.com Xassan –kafi Cali, oo kamid ah aqoon yahannada xaafadda Cawbaarka oo tani iyo fil-yaraantiisa kusoo indha-qaaday geedka Cawbaar oo hoy iyo hiraalba usoo ahaa noolaha guud ahaan ku nool hareerihiisa tiiyoo ciribtirka lagu wado deegaanka Soomaalidu uu wali heegada isku saglayo.
“Cawbaar hadday dhulka ka tireen waxaysan ogeyn inaysan ka tiri Karin qalbiyadeenna. Wuxuu haraadi kusii ahaan doonaa cindigayaga.”
Kadib mudddo badan oo ay waagii baryaba kusoo toosi jireen dhugashadiisa, kaliya in yar ayaa maanta suuraysan Karin xaafaddan oo geedkeedii taallada u ahaa uusan la waabariisan. Caddaw Sheikh wuxuu ku sheegay lama-rumeystaam maqalka aramida leh ee geerida Cawbaar. Wuxuu sharaxay inay ku ahayd cirkaa dheer dhulkaa dheer inuu suureysto Cawbaar oo dhulka sidii xareedda waran.
“Cawbaar waxa umaddiisa ku dhacaya ayuu la wadaagay. Tanina waxay muujisay qiimihiisa. Mood iyo noolba wax-tar ayuu noo ahaa,” ayuu yiri Caddaw Sheikh oo iskaga soo huleelaya Cawbaar oo inta ciidda la jiifsaday fiiro uur-ku-taaleed ku deymoonayay qof walba oo soo booqda.
“Cawbaar muu dhiman ee wuu inaga dhuuntay. Waa inaynu ogaannaa in kuwa la jecel yahayba sidaas uga dhuuntaan kuwa jecel.”
Kulankan ayaa lagu tala-bixiyay in sanad-guuradiisa la xuso gu’ kasta iyo in booskii uu banneeyey lagu beero geedo kale oo raadkiisa kaba. Hayeeshe, markii ugu horreysay taariikhda, tani waa waajib kaas oo fuulaya kaliya ma ahan kuwa madaxda ah, balse bulshada guud ahaan inay dib- qalqaaliyaan beerista iyo baxnaaninta deegaanka guud ahaan gaar ahaan geedaha.
Dal xaalado adag oo dhan kasta oo nolosha kamid ah ay heysato, wax ka qabashada burburka deegaanka ku socda ahmiyad buuran dadkiisa uma lahan. Halka geedo uu Cawbaarku kamid yahayna ay mar un ka sugayaan umadda Soomaaliyeed kuwa abaalkii ay lahaayeen maalin un uga mahad celiya.
Halkan ka daawo sawiradii ugu danbeeyey ee Cawbaar laga soo qaaday.
Previous: Cunsuriyaddu idlaan meyso ayuu yiri Robert Mugabe!!
Next: Abuurka iyo baxaalliga Libaaxa!
Xuska Toddobaadka Macalinka iyo doorka Bulshada